M Cali Geeldoon: Qaran Ma Nahay? – Radio Daljir
Seteembar 30, 2017 1:30 b 0
Dawladkastoo maanta adduunka ka jirta waxaa lagu tilmaamaa “nation state,” ama “dawlad qaran,” taasoo macnaheedu yahay dawlad leh xuduud qeexan, dad dalkaa deggan oo lagu ogyahay, iyo awood u saamaxda inay dadkeeda iyo dalkeeda u taliso, xakamyna karto. Waa qaab-dawladeed ka duwan kuwii hore u jirey ee ku dhisnaa boqortooyada ama diinta. Waana qaab ay reer Yurub la yimaaddeen oo adduunka ku fidiyeen. Maanta Xajkii Rabbi waajibka kaaga dhigay haddaad gudanayso waa inaad oggolaansha ka haysataa Dawladda Sucuudiga. Wiil xarragoonaya ayaa qalin kuugu diidi kara ama kuugu oggolaan kara. Maxaa taa keenay? Ma tihid muwaadin Sucuudi ah. Ma aha mid tala laynaka wediiyeey. Waa qaab ay Reer Yurub doorteen oo u hirgalay, adduunka intiiisa kalena sanka kaga toleen. Waana qaab aynaan maanta meella ka mari karayn haddaynu Soomaali nahay. Saa daraaddeed, waxaynaan ka fursanayn inaynu soo qufno, taariikh koobanna ka bixinno, say “nationalism” (qarannimo ama qarannima-doon) Yurub ugu abuurantay si aynu macnaheeda iyo tilmaameheeda wax uga ogaanno.
Qarannimada Reer Yurub qarnigii 19aad ayaa laba loo kala fasiray: mid ku salaysan rabitaan iyo mid ku salyasan dhaqan, iyo/ama af, iyo/ama dhiig. Tan hore waa tan ay France iyo USA iyo Britain ku dhaqmeen tan kalena waa tan ay Germany iyo Itlay iyo dalalka “Slavs” laysku yiraahdo ee Bariga Europe ay ku yagleelmeen. Tan hore waxaa fasiray aqoonyhannada ay ka midka ahaayeen John Stuart Mill iyo Earnest Renan, tan danbena Johann Herder, Giuseppe Mazzini iyo kuwa kale. Tan hore waxay ku timaaddaa kacdoonno ama isbeddello ay horkacaan dabaqadda dhexe iyo dabaqadda sare (Bourgeoisie), isbeddelladaasoo ay keenaan horumarka ay bulshooyinkaasi gadheen. Tan danbese waa falcelis lagaga hortegayo faragelin ka timaadda xoogag qalaad, ha ahaato mid maskaxeed ama mid hubaysan. Tan hore waxaa lagu doonaa hay’adaha loo yaqaan “liberal institutions,” (hay’ada dawldeed oo madaxbannaan), tan dambena waxaa lagu raadshaa madaxbannaani iyo dawladnimo2. Labada tafsiroodba waxaan ka madhnayn oo ay iskaga mid yihiin dareenka iyo aragtida siyaasadeed ee dad isku tola kana yeela “nation.”
Wuxuu xaalku sii qasmay marka, xilligii Dagaalkii Koowaad ee Caalamka, ay Great Britain adeegsatey tab ay Carabta ugu kiciso dawladdii Turkiga, iyadoo Carabta ugu ballan qaadday inay madaxbannaanidooda helayaan. Waxayse taasi ahayd khiyaano aad u weyn. Markii Dawladdii Turkiga laga guuleeystey, Carabtii dhinaca Aasiya (Asia), halkii ay ka filyeen madaxbannaani, waxaa u tashaday France iyo Great Britain, Filisdiinna waxaa loo fasaxay Yuhuudda. Laba dhaqdhqaaq oo baaxadle ayaa soo baxay: mid ku dhisan Islaamka iyo mid ku dhisan qarannimada Carabta (القوميه العربيه). Dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah waxaa hormuud u noqday الإخوان المسلمون, dhaqdhaqaaqa kalena waxaa hormuud u noqday saraakiil Carbeed oo Ciidammada Turkiga ka tirsanaan jirey iyo Masiixiyiinta Suuriyada Weyn (Suuriya iyo Lubnaan). Fikir ahaan, shakhsiyaadka ugu magaca weynaa fikirka ku dhisan Carabnimadu waa سا طع الحصري iyo ميشيل عفلق. Dawlad ahaanna waxaa siyaasdda Carabnimada ku dhisan mabda’ siyaasadeed ka dhigtay Xukuumaddii Jamaal Cabdannaasir ee Masar iyo Xukuumadihii Bacthiyiinta ahaa ee Suuriya iyo Ciraaq (الأنظمه البعثيه). Si kastaba ha ahaatee, waxaa la yiraahdaa القوميه العربيه waxaa dhabarjab ku noqday jabkii Carabta ka gaadhey dagaalkii 1967-kii ay Israel la galeen, jabkaasoo gilgiley aamminaaddii ay shucuubta Carabtu dawladohooda ku qabeen6. Waxayna u egatahay in labadii dagaal ee uu Maraykanku ku qaaday Ciraaq iyo cawaaqibkii ka dhashay ay wixii la oran jirey القوميه العربيه israaciyeen.
M Geeldoon: Qoraalku waa socdaa >>> Arag hoos iyo bogga xiga ee 2aad >>> Riix Page 2